Curaçao fizahan-tany dia mandray ny sidina mivantana tsy miato avy amin'ny United Airlines avy any Newark
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Curaçao fizahan-tany dia mandray ny sidina mivantana tsy miato avy amin'ny United Airlines avy any Newark
Ny nosy Karaiba Holandey an'ny Curaçao handray tsara isan-kerinandro United Airlines sidina avy any Newark, New Jersey manomboka ny asabotsy 7 desambra.
Ity sidina vaovao ity dia manamarika ny fiverenan'ny serivisy United Airlines any amin'ny nosy taorian'ny folo taona lasa izay, hetsika iray handraisana ny fitomboan'ny fangatahana amerikana ary ahafahan'ny mpitsidika amerikana avaratra misimisy kokoa mankany amin'ilay toerana tadiavina.
Ny sidina vaovao tsy miato dia hiainga isaky ny asabotsy avy ao amin'ny Newark Liberty International Airport (EWR) amin'ny 8:33 maraina ary tonga ao amin'ny Hato International Airport (CUR) amin'ny 2:30 hariva. Ny sidina miverina dia hiala amin'ny CUR amin'ny 3:30 hariva, miakatra amin'ny EWR amin'ny 7:35 hariva
“Ny avaratra atsinanana dia tsena matanjaka hatrany ho an'i Curaçao, ary na dia nankafy fiaramanidina tsy miato avy any JFK nandritra ny taona vitsivitsy aza izahay, ity sidina vaovao ity dia manome safidy sabotsy faharoa ary koa misy fifandraisana fanampiny ho an'ireo mpandeha mitety an'i Newark eny an-dàlana. mankany sy avy any Curaçao, "hoy i Paul Pennicook, tale jeneralin'ny Birao fizahan-tany Curaçao.
"Curaçao dia niaina fitomboan'ny tarehimarika indroa nandritra ny volana maromaro nifanesy, ary tamin'ny nanombohan'ny tetik'asa hotely lehibe roa nanintona an'i Etazonia, dia nitombo hatrany ny fangatahana avy any avaratra atsinanana."
Ny sidina United Airlines vaovao dia namoaka ny fiaramanidina amerikana avaratra an'i Curaçao hita tamin'ity ririnina ity tamin'ny American Airlines, JetBlue, Air Canada ary WestJet.
American Airlines dia hisidina tsy an-kiato avy any Miami mankany Curaçao indroa isan'andro sy isan-kerinandro avy any Charlotte amin'ny asabotsy, raha JetBlue kosa dia tsy hiala sasatra miala an'i John F. Kennedy any New York amin'ny Alatsinainy, Alarobia ary Sabotsy.
Ny Air Canada dia hiasa inefatra isan-kerinandro avy any Toronto ary indroa isan-kerinandro avy any Montreal.
Ankoatr'izay, WestJet dia hanohy hiasa indray mandeha isan-kerinandro avy any Toronto.
FAA: Tsy mifangaro ny drôna sy ny fitaovam-piadiana!
Malezia: nanomboka ny 1 septambra ny 'hetra fiaingan'ny mpandeha fiaramanidina' vaovao